Tsy to teny ianao izany Ra-Prezy an ! - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Miarahaba anao Andriamatoa Filoham-pirenena. Miarahaba anao tokoa tonga soa an-tanindrazana indray rehefa avy nivahiny tany Isiraely ny tenanao sy ireo mpiara-dia aminao. Izao ve ilay tonga amin’ny fiteny mahazatra hoe : “Niverina amin’ny taniny ny Jiosy ?”
Hatreto Andriamatoa Filoha hajaina dia mbola tsy mazava amiko loatra ny votoatin’ny dia anao tany Isiraely. “Mifangaro voraka” ao an-tsaiko loatra ny resaka sy tranga nifanesy tao ho ao momba ny Jiosy sy ny Malagasy sy ny Jiosy sy ny tantaram-pirenena.
Raha ny tantaram-pirenena tany amin’ny fiandohan’ny taona 70 dia ny fisian’ny FRS no tsy hay tohaina ary mitambolona ao an-tsaina. Ny FRS an Forces Républicaines de Sécurité no teny Analakely ny taona 1972. Ny fanarahan’izy ireo baiko nitifitra no nahatonga izany toerana izany ho lasa Kianjan’ny 13 mey taty aoriana. Tsaroana fa mifamingotra amin’i Isiraely ny fananganana an’ireo andiana polisy FRS ireo. Fitaovam-piadiana avy any no nampiasain’izy ireo.Marihina fa fitaovam-piadiana nafarana ara-dalana izany fa tsy nampidirina antsokosoko akory. Ny tiana avoitra dia fiaraha-miasa eo amin’ny lafiny fiarovana no isan’ny manavanana an-dry zareo Isiraelianina ireo. Ka izay ve no navesa-danja tamin’ny dia tany Isiraely ? Lazao mazava mba tsy ho lasa fahotana mahafaty indray rahampitso izany. Mbola handany vola amin’ny fanafarana fitaovam-piadiana mamono olona ve isika ? Ekena ny fikatsahana ny fandriampahalemana fa sao ny fampihavanana no fomba mahomby kokoa noho ny fanafarana fitaovam-piadiana e !
Tsy sasa-miantso io fampihavanana io ireo fikambanana miady hahatanteraka izany. Ao ireo mikatsaka ny CASE, Conférence Au Sommet Elargi. Ao ireo mpiara-dia amin’ny CRN. Ao ireo mangataka ny fiverenan’ny FFKM hampihavanana. Ianao koa Andriamatoa Filoha dia milaza fa vaindohan-draharahanao io fampihavanana io. Izao anefa sao mba fandrangitana ny fananganana ny HVM ? Ny fampihavanana ve fampidirana ny Malagasy ao an-tranonao satria tsy to teny ianao any ivelan’io tranonao io ?
Nilaza tokoa ianao Andriamatoa Filoha fa laharam-pahamehana ho anao ny fampihavanana. Niezaka ianao nirotsaka antsehatra tany Amboasary Atsimo ny asabotsy 14 jiona teo nampifanatrika ireo niady avy any Andranondambo sy ny avy any Ambatotsivala arahabaina aloha ny fahasahianao niroso nampihavana mivantana. Heveriko fa tsara ny vokatra azonao tany na dia tsy tonga aza ny andaniny fa ny ankilany ihany no namaly antso. Hitanao amin’izany ny fahasarotan’ity fampihavanana ity. Mora tononina ambava fa sarotra tanterahina. Hitanao koa fa misy ao andapa ao mpanolotsaina tsy matotra. Matoa izay nanao ny fandaharam-potoana tsy nahalala fa tsy ho avy akory ny andaniny dia tsy matotra izany mpanolotsaina izany. Anjaranao ny mitandrina. Sao tsy matotra tahaka izany koa izay nandresy lahatra anao ho any Isiraely. Marihiko fa efa nomasahan’ny FFM anie ny asanao momba ity fampihavanana an’Ambatotsivala sy Andranondambo ity. Sa… ianao mihitsy no tsy to teny Andriamatoa Filoham-pirenena ?
Jiosy mahay mampiasa tany
Dia tsy mety tokoa ny resaka, Andriamatoa Filoha, fa miverina amin’ity dianao tany Isiraely ity. Nahoraka ny filazana fa omena an-dry zareo Isiraelianina ny velaran-tany 18 tapitrisa hekitara. Matoa nivoaka ana-gazety izany resaka izany dia nisy izy io. Nahazo rariny ve ireo mpitady tany ampiasaina ? Nahazo rariny ve ianao sy ny delegasiona nitady manam-pahaizana ampiasa tany ? Tsiahivina tokoa fa nanambara ny Minisitra lehiben’ny antoko HVM fa ny tany efitra (dezaka hoy ny zanaky ny vahoaka) aza vitan-dry zareo ny mamokatra amin’izany ka maika fa ireo any masaka sy lonaka eto amintsika izay toa tsy aintsika ny mamokatra eo amboniny. Izany fanambarana izany dia midika fa nisy tany resaka momba ny fahatongavan’ireo Isiraelianina hampiasa ny fahaizany aty amintsika. Tao ho ao tokoa ianao dia nanizingizina fa tsisy an’izany fanomezana tany ho an’ny vahiny izany fa tokony hatsahatra eo izany. Toa nampitahotra mihitsy aza ny feonao Andriamatoa Filoha… sa diso ny sofiko ?
Ataovy mazava ny resaka momba ity fiaraha-miasa amin’ny Isiraely ity. Nahoana no tampoka teo dia hiaraka aminy isika ? Nahoana no tampoka teo dia nisesy nankany ianareo mpitondra ? Tsiahivina fa nandeha tany ny Filohan’ny Tetezamita Andry Nirina Rajoelina raha izy mbola amperinasa iny. Nandeha tany koa i Hasina Andriamanjato, minisitra niaraka taminao tao amin’ny goverinemanta nandritra ny Tetezamita. Dia tsy voa sakana ny saina mahita an’ireto sokajin’olona maromaro mivoy fa jiosy ny gasy. Sao mba ho voan’ny “tic tac dou” (hiran’ny mpitondra fivavahana jiosy io e). Marihina fa efa maromaro ireo mitonona ho manaraka ny fomba fivavahana jiosy ao izany judaïsme cabalistique izany, ao ny jodaisima mesirima sy ny hafa e. Fifandrifian-javatra ve ?
Tonga soa eto ianao Ra-Prezy fa tena jereo amin'izay ny amin'ny fampandrosoana sy ny fampihavanana tena izy e.